Yevacheche EVA epurasitiki kapeti pikicha furo pasi bonde, gobvu kusona uye yakazara pasi bonde yemubhedhuru
Kapeti yemhando yepamusoro, matawi epasi, mameti anokambaira, zvishongedzo zvekugadzira, zvinoita kuti imba yako ive inodziya zvakakwana
Inopinza, isina kutsvedza uye yakanaka
Vatengi vanoti chakanaka chakanaka chinoonekwa mhando inoonekwa mhando
Yakakwira-mhando mhando yekapeti haityi kuwedzera
Akanaka uye akapfava machira
Inzwa wakasununguka nekukanda pakuda
Yakakwirira-giredhi yakavharidzirwa machira anowirirana, akapetwa zvakasimba, anonzwa kugadzikana, hunyoro-chiratidzo uye husina mvura, nepo uchinyatso kudzivirira ruzha, inogona kushandiswa mumwaka wese
Texture ratidza pasi risinga tsvete pasi T-yakasarudzika pateni yekumonera yakasimba uye yakasimba nzvimbo Yakakwidziridzwa vhezheni yakavharidzirwa refu yakapfava donje velvet, yepasi EVA yakatetepa T-yakasarudzika pateni, isina-kutenderera inogona kuvimbisa iro chairo hukobvu hwepasi mat
Iyo dhizaini dhizaini inoita kuti pasi pasi ive yakasimba, isina-kutedzemuka uye hunyoro-chiratidzo. Iyo yekutanga hukobvu hwe0.7CM yakagadziridzwa isina deformation uye kusimba. Ukobvu hwe1 .OCM hunoita kuti tsoka inzwe kugadzikana
Hwemhizha hunyanzvi, nyore kutarisira, hapana lint, hapana rakadeurwa ruvara, zvakatipoteredza zvine hushamwari uye zvisina hunhu, yemhando yekugadzira tekinoroji, gobvu mateti, kukwirira kwakanyanya, kunamatira kunoshanda pasi, kudzivirira kutsvedza
Cheka imba yese mune chero saizi pakuda
Inogona kutemwa uye kupeterwa zvinoenderana nesaizi inodiwa kuti imba yose izare nemakona
Nyore kuchenesa, washable uye Vacuum cleaner
Zviri nyore kukatanura, kugeza uye kuunganidza, ndeipi yakasviba uye ndeipi inobviswa; inogona kucheneswa nemuchina wekutsvaira, kana inogona kucheneswa uye kugezwa mumvura yehusiku.
Yemahara kupaka mavara kuratidza
1.Pasi bonde chigadzirwa chinoumbwa neyepamusoro-tembiricha inopupa furo, EVA nyowani nyowani zvinhu, yakachengeteka uye zvakatipoteredza zvine hushamwari zvinhu, zvisina-chepfu uye zvisinga gumbure hwema, uye inogona kuiswa kune akasiyana maficha, senge: yekurara, kugara imba, imba yevana, dzimba dzekugara, balcony, yoga nzvimbo, jimu, zvitoro, mapaki enhandaro, kindergartens, nezvimwe.
Iko pamusoro pekushongedzwa kweiyo foam pasi mat iri yakajeka, izere uye yakasarudzika. Inogadzikana pasi pekuremerwa kwakanyanya. Iyo yakasimba uye yakasimba. Haina kuremara kwenguva yakareba. Iyo inotora nyore-ku-bhureya magiya, ayo anogona kunge akasungwa akasungwa uye nyore kukatanurwa. Dhizaini inotsikika inochengetedza nzvimbo painochengetwa nekuchengetwa;
Hunhu hwemaputi epasi furu: yakanakisa inochinjika, kunyaradza uye kupfava. Iyo dhizaini dhizaini inoita kuti kuwanda uye kusimba kuve kwakaringana. Iko kusungirirwa kwakasununguka kwakaenzana nekuisa zvinokatyamadza pasi. Dhizaini iri kutevedzera ganda remunhu. Inotsvedzerera asi haitsvedza, zvinova zvakafanira kuti vacheche vadzidze kufamba nekukambaira. Dzivirira mabvi emwana wako, dzivirira mapundu uye uunze kuchengetedzeka kumwana;
Yakareruka kuchenesa, isina mvura uye isina kusviba, zvisinei kana iri muto, zviyo zvemupunga, zvinyoro zvemukaka, mavara emuti weti, makwapa emvura, hazvizoname uye kusanamatira, zvinodzora kukura kwebhakitiriya, ingosuka nemvura, unogona shandisa zvakare, kuchengetedza nguva uye kushanda nesimba;
Kutonhora uye kupisa kupisa, kwakakodzera mwaka wese, kushamisika-chiratidzo, kudonhedza-chiratidzo, anti-skid ichivhara mwando, kurira kwekudzivirira uye kudzikisira ruzha, micheto yakaoma uye isina burrs, yemwana-inoshamwaridza mutambo;
Yakapfava uye isiri nyore kuumbika, inogona kudimburwa pamadiro, yakasununguka kupatsanurwa, yakasununguka kusanganiswa, yakasununguka kushandisa zvisikwa, makona anogona zvakare kuiswa, akachengeteka uye hapana magumo akafa
Zvigadzirwa zvinotumirwa zvakaongororwa zvakanyanya zvemhando yepamusoro kuona kuchengetedzeka uye zvinotengeswa pasi rese, senge United States, Japan, Belgium, Denmark, Germany, Netherlands, Croatia, Italy, United Kingdom nedzimwe nyika zhinji.
Yese-mutambo mutambo sisitimu, usasarudze yakapusa uye fashoni maitiro
Pashure: Yevacheche yekurara puzzle pasi mwana anokambaira bonde gobvu kusona mat tatami isiri-inotsvedza pasi mateti mutambo bonde
Zvadaro: Eva velvet bonde mucheche dambanemazwi kapeti furo suede mats vana kutamba gumbeze yekurara mosaic pasi mats
Vana Vanotamba Mat Puzzle
Vana Pikicha Pasi
Vana Dambanemazwi Floor Mat
Vana Puzzle Mapuriro
Thicken yoga bonde Eva zvinhu varume nevakadzi kukodzera ...
ew chigadzirwa mucheche mucheche zvinokambaira chakakora s ...
Yoga bonde kugwinya bonde Ndiwedzere yepamusoro-arambe achirema asiri-s ...
Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, AMP Mobile Floor Mat Puzzle, Floor Furo Rakajeka Mat, Floor Puzzle Mat Cushion, Floor Furo Rakajeka, Floor Rakajeka, Yepasi Yekunze Exercise Mat, Zvese Zvigadzirwa